Rubber Roller, Rubber Mixer, Rubber Filter - Hery
Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd. dia matihanina mpanamboatra fitaovana fingotra maoderina manambatra fikarohana sy famokarana siantifika.Hamaky bebe kokoa
Ny vokatra lehibe ao anatin'izany dia ny: Rubber Roller Stripping Machine, CNC Grinding / Grooving Machine, CNC Cylindrical Grinder, Rubber Roller Covering Machine, Etc. Hamaky bebe kokoa
Rehefa liana amin'ny iray amin'ireo entinay manaraka anao izahay mijery ny lisitry ny vokatra, azafady azafady mba mifandraisa aminay hanontany. Afaka mandefa mailaka aminay ianao ...Hamaky bebe kokoa
Nandritra ny 20 taona lasa, ny orinasa dia tsy vitan'ny nanokana ny heriny rehetra ho an'ny R&D sy ny famokarana fitaovana, fa koa mikaroka hatrany ny teknolojia famokarana tonga lafatra.
Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, ny orinasanay koa dia mandray anjara amin'ny famokarana manan-tsaina amin'ny indostrian'ny roller rubber. Ny maody Industry 4.0 dia hampiharina amin'ny famolavolantsika fingotra atsy ho atsy.
Niorina tamin'ny 1998
Jinan Power Rubber Roller Equipment Co., Ltd. dia matihanina mpanamboatra fitaovana fingotra maoderina manambatra fikarohana sy famokarana siantifika. Niorina tamin'ny taona 1998, ny orinasa no fototra iorenan'ny famokarana fitaovana manokana amin'ny fantson-tsolika any Shina. Nandritra ny 20 taona lasa, ny orinasa dia tsy vitan'ny nanokana ny heriny rehetra ho an'ny R&D sy ny famokarana fitaovana, fa koa mikaroka hatrany ny teknolojia famokarana tonga lafatra.
Ny vokatra lehibe ao anatin'izany dia ny: Rubber Roller Stripping Machine, CNC Grinding / Grooving Machine, CNC Cylindrical Grinder, Rubber Roller Covering Machine, Rubber Roller Polishing Machine, Professional Measuring Instrument, Etc.
Jinan Qiangli Rubber Roller Equipment Co., Ltd. dia manampahaizana manokana amin'ny famokarana kojakoja vita amin'ny fingotra, miaraka amina famokarana matanjaka. Miaraka amin'ny hery ara-teknika matanjaka sy ny fanangonana traikefa manan-karena, ny karazana fitaovana rehetra dia eken'ny besinimaro ho an'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany. Ny vokatra dia amidy amin'ny firenena maherin'ny 20 manerana an'izao tontolo izao, anisan'izany i Etazonia, Alemana, Korea atsimo, Afrika atsimo, ary Brezila. Mikasika ny kalitao, ny haitao ary ny traikefa, Jinan Qiangli Rubber Roller Equipment Co., Ltd. dia nanjary mpitarika ny indostria fampitaovana fingotra ary eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny vokatra izay novolavolain'ny orinasa dia ahitana: fantsom-bozaka mandeha ho azy ary mihodina, masinina manokana, fantsom-bozaka vita amin'ny plastika maro karazana, fantsom-bozaka vita amin'ny plastika maro karazana, mpitsongo laser manokana ho an'ny rozika ary lohan'ny fikosoham-bary manokana. Ireo vokatra etsy ambony ireo dia nahazo mari-pankasitrahana vokatra nasionaly na faritany valo ary mari-pankasitrahana fikarohana siantifika telo ao amin'ny Faritanin'i Shandong. Tamin'ny 2002, ny vokatra dia nandalo ny fizahana ny CCIB Quality Center sy ny ISO9001: 2000 fanamarinana rafitra kalitao nasionaly. Tamin'ny 2013, nahazo fanohanana manokana ho an'ny fikarohana sy fampandrosoana siantifika sy teknolojika ao amin'ny Distrikan'i Shizhong, Jinan izy, ary nanomboka nanangana ivon-toeram-pampianarana haitao fampitaovana ara-teknika. Amin'ny fampiasana ny fitaovantsika, ny orinasa dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny famokarana, manatsara ny kalitaon'ny vokatra, mitahiry vola ary mitondra tombontsoa lehibe kokoa ho an'ny mpampiasa.
Ny orinasa dia manaraka ny foto-kevitry ny "mpanjifa aloha", namolavola sy namokatra karazana fitaovana famokarana roller fingotra isan-karazany, izay nahafa-po ary nahazo dera avy amin'ireo mpampiasa. Hamorona tombony ara-toekarena lehibe kokoa ho an'ireo singa mpampiasa ny orinasa miaraka amina endrika matihanina tsara, serivisy manara-penitra, teknolojia faran'izay tsara ary vidiny mirary.